N'ozuzu, ndetu na akara ngosi na iPhone apụghị akwụsị, n'ihi na ọ bụ a wuru na-ngwa site Apple. Gịnị okụrede bụ mgbe dee ọdịnaya. Ewezụga bụ na gị na iPhone e jailbroken. N'okpuru ọnọdụ a, ndetu na akara ngosi nwere ike n'anya. N'agbanyeghị nke ọnọdụ na ị na okosobode, ka ego otú e si edozi ma ndị a abụọ iche iche nke mbipụta ọnụ.
The Notes icon okụrede (otú iji mee ka ọ azụ)
Echegbula mgbe ị na-ahụ na ndetu icon na-efu na gị iPhone, maka akara ngosi nwere ike ghara ehichapụ ma ọ bụ ike ịnwe mmachi. Ọ ga-kwagara n'ime a n'ụlọ ihuenyo peeji ma ọ bụ a n'ụlọ ihuenyo nchekwa. Ọ bụrụ na ị ka nwere ike chọta ya n'ụzọ ọ bụla, dị nnọọ aga Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Tọgharịa Home ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu. Ebe i nwere ike tọgharịa Ihuenyo okirikiri nhọrọ ukwuu gị iPhone ụlọ ọrụ ntọala, na ị pụrụ ịchọta Notes na akara ngosi na mbụ ebe.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere mkpa ndetu ịchekwa na gị iPhone n'ihu na ị na-achọghị ka ida ha, ị ga-mma agbalị naghachi ha mbụ, ma ọ bụ ha ga-overwritten site resetting. Ọ bụ nnọọ mfe. Dị nnọọ na-eso nduzi n'okpuru na-enye ya a-agbalị.
The Notes ọdịnaya okụrede (otú naghachi ya)
The ngwa ngwa ị na-eme mgbake, ibu ohere i nwere ike inwe naghachi gị efu ndetu. Kedu? Atụla crazy. Na a kwesịrị ekwesị mgbake ngwá ọrụ, ị pụrụ ime ya na-enweghị mgbalị. Enweghị echiche nke software? A bụ m nkwanye: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) (Mac). Site na iji software, ị nwere ike nza nke na-efu data na iPhone, gụnyere ndetu, ozi, kọntaktị, wdg Gịnị bụ ihe ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara gị ugbu a ndetu na iPhone, ma nke software nwekwara ike inyere ndabere ha .
Download free ikpe version n'okpuru na-agbalị ya maka free!
Part 1: Naghachi ndetu si iTunes ndabere
Nkebi nke 2: Kpọmkwem ike iṅomi naghachi ndetu si iPhone
Nzọụkwụ 1. Họrọ ngwaọrụ ndabere ka wepụ
Ebe a, ka na-Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) dị ka ihe atụ. The windows version na-arụ ọrụ ahụ.
Mgbe ị na-agba ọsọ ahụ omume na gị Mac, pịa naputa site na iTunes ndabere File n'elu nke isi window. Niile nke gị iTunes ndabere faịlụ ga-akpaghị aka depụtara dị ka e gosiri na window n'okpuru. Họrọ onye na maka gị iPhone na pịa Malite iṅomi wepụ ọdịnaya nke ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake ehichapụ ọ bụ furu efu ndetu
Doppler ga-ewe gị sekọnd ole na ole. Mgbe ọ na-okokụre, na interface ga-adị ka onye n'okpuru. All gị aga na data na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ na-amịpụtara na egosipụta na anya edemede. Ị nwere ike ịhọrọ Notes na-agụ ọdịnaya na zuru ezu. Mgbe ahụ akara ndị ị chọrọ na-azọpụta ha na kọmputa gị selectively.
Dị nnọọ ka window-egosi n'elu, a iPhone ekwu mgbake software nwekwara ike inyere ịchọta azụ gara aga photos, videos, kọntaktị, ozi na-akpọ akụkọ ihe mere eme na gị iPhone, na i nwere ike naghachi ha niile na otu click n'otu oge ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa. Ma otu ihe dị mkpa ka ị ntị bụ na adịghị mmekọrịta gị na ngwaọrụ na iTunes mgbe ị kwụsịrị data, ma ọ bụ iTunes ndabere ga-emelitere na ọdịnaya na-aghọ otu dị ka ihe na ngwaọrụ gị ugbu a.
Nkebi nke 2: Kpọmkwem iṅomi ma naghachi ndetu si iPhone
Ebe a, ka na-agbalị na Wondershare Dr.Fone maka iOS (Windows) ime nke a, ọ na-arụ ọrụ niile iPhones, gụnyere ndị ọhụrụ iPhone 6 na 6 Plus, niile iPads na iPod aka 5/4. N'otu oge ahụ, Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac) nwekwara ike ime nke a.
Na-agba ọsọ usoro ihe omume na jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa. N'okpuru nhọrọ nke "naputa site na iOS Ngwaọrụ", ị ga-enweta ihe interface dị ka ndị a.
N'ihi na iPhone 6/6 Plus / 5 / 5C / 5S / 4S, iPad na Retina Ngosipụta, iPad Obere, ọhụrụ iPad, iPad 2 na iPod aka 5:
N'ihi na iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4 (Download a nkwụnye na na mbụ):
Nzọụkwụ 2. Iṅomi ngwaọrụ gị furu efu ndetu
Tupu achọta gị aga na ndetu si gị iPhone 4 / 3GS, iPad 1 na iPod aka 4, ị chọrọ iji nweta n'ime ngwaọrụ scanning mode mbụ. Soro nzọụkwụ n'okpuru ịbanye ya:
Jide ngwaọrụ gị n'aka gị na pịa Malite bọtịnụ na usoro si window n'elu.
Pịa Ike na Home buttons n'out oge maka 10 sekọnd.
Mgbe ị na-ọma banyere ngwaọrụ scanning mode, Wondershare Dr.Fone maka iOS ga-akpaghị aka iṅomi gị na ngwaọrụ chọta furu efu ndetu na ya.
N'ihi na ndị na-eji iPhone 6/6 Plus / 5 / 5C / 5S / 4S, iPad na Retina Ngosipụta, iPad Obere, ọhụrụ iPad, iPad 2 na iPod aka 5, ị nwere ike ozugbo pịa Malite iṅomi ka iṅomi ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake furu efu ndetu
Mgbe Doppler, ị nwere ike ihuchalu niile ọdịnaya na a hụrụ tupu mgbake. N'ihi na ndetu, ịnwere ike ihuchalu ha na udi nke edeturu. Akara ndị ị chọrọ na pịa Naghachi, na i nwere ike ịzọpụta ha na kọmputa gị dị ka a HTML faịlụ na kọmputa gị.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-agụnye ehichapụ data na ndị ka na-na ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị azụ gị ehichapụ n'anya, ị nwere ike nụchaa Doppler N'ihi site na iji slide bọtịnụ na n'elu na naanị gosipụta ehichapụ ihe.
Naghachi SMS si iPhone: Nke a ndu-egosi gị otú iji weghachite ehichapụ ozi ederede site na iPhone ụzọ dị iche iche. Naghachi iPhone Ndi ana-akpo: Ị nwere ike naghachi ehichapụ kọntaktị na-enweghị a ndabere na iPhone na 3 nzọụkwụ ala. Naghachi Videos on iPhone: Isiokwu a na-egosi gị otú naghachi furu efu vidiyo na iPhone na ụzọ abụọ. Naghachi iPhone Photos: ehichapụ photos ka nwere ike-natara na gị iPhone. Ị nwere ike ịchọta ihe ngwọta e nwere. Naghachi Notes si iPhone: Isiokwu a na-egosi gị ụzọ iji weghachite furu efu ndetu na ihe iPhone na nzọụkwụ. Naghachi oku History na iPhone: Ị nwere ike naghachi iPhone ndepụta oku kpọmkwem site iPhone ma ọ bụ iTunes ndabere, gụnyere abata, na oku na oku azaghị. Naghachi iPhone oziolu: Isiokwu a na-agwa gị ihe mere oziolu nwere ike Ewepụtara na otú weghachite oziolu on iPhone na ụzọ abụọ.
> Resource> iPhone> Olee otú iji dozie iPhone Notes Icon efu ma ọ bụ Zoro Ezo